नेपाली पब्लिक बुधबार, पुस २८, २०७८
कानुन समाजको ऐना हो । कानुन सामाजिक नियन्त्रण र परिवर्तनको साधन हो । कानून विशेषतः दण्डद्वारा निर्देशित हुन्छ । निश्चित मूल्य र मान्यतामा आधारित व्यवस्थित समाजको निर्माण गर्नु कानूनको सार हो । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन र सामाजिक नैतिकता कायम गराउने भएकाले कानुनलाई समाजको ऐना मानिएको हो । जुन ऐनाले समाजमा रहेका विसङ्गतिलाई जरै देखी उखेलेर फाल्ने प्रयास गर्दछ ।
कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन। अर्थात कसैले कानुन नजानेर अपराध गरेको छ भन्दैमा उसलाई छुट हुँदैन । देशमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका ऐन र नियमको व्यवस्था छ । जसको लक्ष्य न्याय हो । तर पनि अझै कति व्यक्तिहरु कानुनबाट विल्कुलै अन्जान भएर पीडित हुनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले राम्रोसँग देखिरहेका र भोगिरहेका छौं कि देशमा जे जस्ता कठिन कानुन भएता पनि ति राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आएका छैनन् अर्थात कागजमा मात्रै कानुन सीमित छ ।
कानुनमा व्यवस्था गरिएका कानुन विपरीत नै कार्यहरू भैरहेका छन् तर यो कागजको कानुन मौन छ ।
मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले हाम्रो देशको सामान्य कानुनको रुपमा मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ छन् । कसुरको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन पनि छ । यी ऐनमा विभिन्न प्रकारका कसुरसँग सम्बन्धित कानुनको व्यवस्था गरेको छ । तर पनि उचित कार्यान्वयनको खाँचोले ती कानुनहरू किताबमा मात्रै सीमित देखिन्छ ।
साधारण मानिसलाई कानुनी शब्दमा Layman लाई यस्तो लाग्छ की न्याय पाउनुपर्ने व्यक्ति अन्यायमा परेका छन् भने सजाय पाउने व्यक्तिहरुले छुट पाएजस्तो देखिन्छ । फलानो अभियुक्त धरौटीमा छुट्यो भन्ने खबरलेसाधारण मानिसले अभियुक्तले छुटकारा पायो भन्ने सोच्छ ।
उसलाई यो लाग्छ की कानुनमा व्यवस्था गरिएका कानुन विपरीत नै कार्यहरू भैरहेका छन् तर यो कागजको कानुन मौन छ ।
अब बेलिविस्तारमा कुरा गरौँ । हामीले समाजमा छरपस्टै देखेको, सुनेको र भोगेको एउटा समस्या वालविवाह हो । २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा कानुनमै व्यवस्था छ । तर वालविवाहका भएकै छ । विशेषगरी मधेश र अलि दुर्गम क्षेत्रहरुमा वालविवाह रोकिएको छैन ।
पीडितका लागि न्याय र अपराधीका लागि सजायको व्यवस्था गरी कागजको कानुनमा मात्रै सिमित राखेर हुँदैन । कार्यान्वयनमा पनि लिनुपर्दछ ।
वालविवाहलाई समाजले अपनाएता पनि कानुनले अपनाएको छैन । यसरी हेर्दा वालविवाह मात्रै नभएर समाजमा विभिन्न प्रकारका अपराधहरु भएका छन् ।
अर्को कुरा कानुनले १६ वर्षमा नागरिकता दिने भन्छ । १८ वर्ष मुनिकालाई वालवालिका भन्छ तर विवाह गर्न भने २० वर्षमा ? यो बिचको २ वर्षलाई कानुनले चिन्दैन । करणीको सवालमा समेत १८ वर्षमुनिको सहमतिको सम्पर्कलाई पनि बलात्कार भनिरहँदा १८–२० वर्षको समयमा मौन छ । किनभने २० वर्षपछि मात्र विवाहलाई मान्यता दिएको छ । बिचको समयलाई विवाहपुर्वको सम्पर्कलाई पनि मान्यता दिएजस्तो देखिन्छ । समाजिक मुल्य मान्यता भन्दा अगाडि कानुन पुगेको भान हुन्छ ।
यस्तै मुद्दा वहुविवाहमा पनि छ । वहुविवाहलाई अपराध करार गरेको छ । अघिल्लो श्रीमतीको सहमतिमा समेत अर्को विवाह गर्न मिल्दैन । समाजमा राजीखुशीले दुईजना बसेको हामीले नदेखेको हैन । तर अब कानुनी मान्यता भने एक जनाको मात्र हुने भएको छ । त्यसैले यो ठूलो डिबेट हो कानुन अगाडि कि समाज ? त्यसैले यो परिप्रेक्षमा भने कानुन समाज भन्दा अगाडि पुगेको भान हुन्छ । यी र यस्ता विषयहरू नसल्टाएसम्म कानुन कागज सरह हुनेछ ।
जबर्जस्ती करणी गर्नुहुँदैन भनेर कडा सजायका व्यवस्था उल्लेख गरिएता पनि कति निर्दोष वालिकामाथि करणी भैरहेको छ । उनीहरूलाई त योसम्म पनि थाहा छैन कि उनीहरुमाथि के भइरहेको छ ?
पीडित अनी गरिबीमा रुमलिएका जनताहरूको मगजमा केसम्म छाप बस्न गयो भन्दा धनीहरू वा शक्तिमा भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्रै कानून बनेको हो ।
जस्तो कि हामी आफैले देखे सुनेको घटनालाई हेर्ने सकिन्छ, निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड । उनलाई जबर्जस्ती करणी गरी हत्या गरिएको थियो तर घटनाको अपराधीले अहिलेसम्म सजाय पाउन सकेन । अपराधी पत्ता लगाउन सकिएन । अनि तपाई आफै भन्नुस्, के कानुन किताबका पानाहरुमा सीमित त भैरहेको रहेनछ त ? यस्तो देख्दा साधारण मानिसलाई यो लाग्छ की कानुन कागजमा सीमित छ । उसले कसुर र न्याय निरुपणको लामो फेहिरस्त कार्यविधि बुझ्दैन ।
समाजमा अझै अलि लुकेर बसेको कुकर्महरु घरघरमा होलान् । ती अपराधहरू लुकिछिपी घटिरहेका होलान् । हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन, अहिले हाम्रै समाजमा कैयौँ परिवारले गर्भवती महिलालाई गर्भपतन गराउन, उनलाई मानसिक रुपमा पिडा दिएर जबर्जस्ती गर्भपतन गराइरहेका हुन्छन् । उनका परिवारहरूले दबाब दिन्छन्, किनकी उनको पेटमा छोरीको गर्भ छ । कानुनमा त व्यवस्था गरिएको छः कसैले पनि गर्भवती महिलालाई करकापमा पारेर वा धम्की देखाई गर्भपतन गराउनु हुँदैन । तर फेरि उहीँ कुरा साधारण मानिसले बुझ्दैन अनि कार्यान्वयन खै भएको भनेर प्रश्न गर्छ ?
पीडितका लागि न्याय र अपराधीका लागि सजायको व्यवस्था गरी कागजको कानुनमा मात्रै सिमित राखेर हुँदैन । कार्यान्वयनमा पनि लिनुपर्दछ । त्यसको साथै साधारण मानिसलाई बुझाउनु पनि पर्छ । कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कुरामाथि नै आइपुगेको छ । कानूनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ तर किन जघन्य अपराध गरिरहेका व्यक्तिहरू खुलेआम हिँडिरहेका जस्तो देखिन्छ । पीडित व्यक्तिहरू झन् अन्यायमा परेको जस्तो देखिन्छ आम मानिसलाई बुझाउनुपर्छ ।
जसको निम्ति कानुन बनेको हो, उसैले यी कुरा नबुझेपछि कानुन कागजको खोस्टो मात्र कहलिन्छ ।
कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ । कानुनले पिछडा, ग्रामीण क्षेत्र र शहरीया क्षेत्र भन्दैन । पीडित अनी गरिबीमा रुमलिएका जनताहरूको मगजमा केसम्म छाप बस्न गयो भन्दा धनीहरू वा शक्तिमा भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्रै कानून बनेको हो । उनैले मात्रै न्याय पाउँछन् । तर त्यो हैन ।
हो म मान्छु नेपालमा पुराना संस्कृति, परम्पराद्वारा निर्देशित भएको समाज हो । नयाँ नयाँ सुधार ल्याउन समय लाग्छ । तर बनाएका नियम कानुन पनि त कागजका पानामा कागजको कानुन भएर सीमित रहनुहुँदैन ।
पीडितका लागि न्याय र अपराधिका लागि सजायको व्यवस्था कानुनका किताबमा मात्रै सीमित भएर हुँदैन । आम मानिसले बुझ्ने भाषामा तपाई हामीले बुझाउनुपर्छ । कानुनमा भएका छिद्रता हटाउनुपर्छ । जसको निम्ति कानुन बनेको हो, उसैले यी कुरा नबुझेपछि कानुन कागजको खोस्टो मात्र कहलिन्छ । कानुनले दिलाउने परिवर्तनको महसुस नहुन सक्छ ।
लेखक पौडेल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन् ।
#कागजको_कानुन #मध्यपश्चिमाञ्चल_विश्वविद्यालय #स्कुल_अफ_ल #सन्जु_पौडेल
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २८, २०७८
बुधबार, असार १५, २०७९ नवजीवन सहकारीका १० जना कर्मचारीमाथि कारबाही
बुधबार, असार १५, २०७९ चक्र र अनिताको आवाजमा रहेको ‘खेल मेरी दर्कादरी’ सार्वजनिक
बुधबार, असार १५, २०७९ पार्टीका सबै शक्ति आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित गनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल
बुधबार, असार १५, २०७९ गल्ती सुधारे धान निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिन्छ : अध्यक्ष ओली
बुधबार, असार १५, २०७९ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट पारित
बुधबार, असार १५, २०७९ आगामी तीन दिन उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको आग्रह
नवजीवन सहकारीका १० जना कर्मचारीमाथि कारबाही
चक्र र अनिताको आवाजमा रहेको ‘खेल मेरी दर्कादरी’ सार्वजनिक
पार्टीका सबै शक्ति आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित गनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल नेपाली पब्लिक
गल्ती सुधारे धान निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिन्छ : अध्यक्ष ओली नेपाली पब्लिक
अछाममा गोरु जोत्दै योगेश भट्टराई (भिडियोसहित)
लुम्बिनीकी राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले दिइन् राजीनामा
विभूषणमा सुनको परिणाम घट्ने, अन्य के–के गर्‍यो मन्त्रिपरिषदले निर्णय ? (सूचीसहित)
अविरल वर्षाका कारण जनकपुरधाम जलमग्न